युगसम्बाद साप्ताहिक - माओवादीसंग मिलेर एमालेलाई सिध्याउने कि आफू सिद्धिने हो ?
Saturday, 04.04.2020, 02:39am (GMT+5.5) Home Contact
माओवादीसंग मिलेर एमालेलाई सिध्याउने कि आफू सिद्धिने हो ?
Tuesday, 09.12.2017, 11:56am (GMT+5.5)
० देशमा निर्वाचनको माहौल छ, कांग्रेसको चुनावी तयारी कस्तो छ ?
निर्वाचनमा पार्टी जाँदै छ । पार्टीबाट कस्तो व्यक्तिलाई टिकट दिइएको छ, धेरै कुरा त्यसले निर्भर गर्छ । नेतृत्वले एकपक्षीय ग¥यो भने राम्रो रिजल्ट आउँदैन ।
० टिकट वितरण नेतृत्वमा बस्नेले एकपक्षीय रुपमा गरेको छ भन्न खोज्नु भएको ?
अब त्यो अझै हेर्न बाँकी छ, म भन्न त भन्दिनँ । साथीहरुले भन्दा चाहिँ अली पक्षपात भएको छ भन्छन् । त्यो भएको खण्डमा नेपाली कांग्रेसले धेरै क्षति ब्यहोर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले सबैलाई समेटेर लिएर जानुपर्छ भनेर हामीले बारबार त्यो म्यासेज दिइरहेका थियौं । जस्तो अब पार्टीभित्र गुट छ, उपगुट छ, धेरै गुटहरु छन् । यता एकदम बलियो गु्रप छ । जुन पहिल्यै देखिन् चुनाब लड्दै आइरहेको, गिरिजाबाबुको पालादेखिन् । बीपी र गिरिजाबाबुको विचारलाई अगाडी बढाउने जुन एउटा ठूलो समुदाय छ उनीहरुलाई माइनस गरेको हो कि भन्ने फिल भईरहेको छ ।
० भनेपछि नेतृत्वले कांग्रेसको ओरिजिनल विचारलाई समेट्न सकेन भन्ने हो ?
हो, त्यो ग्रुप जुन बीपी र गिरिजाबाबुको धारलाई बोकेर हिंडेको छ । जुन ग्रुप देशभरी छ र कांग्रेसको आस्था बोकेको विचारको मूल ग्रुप हो । पार्टीको विचारलाई लिएर हिंड्ने त्यो समूहलाई कमजोर पार्ने, त्यो समूहलाई बाहिर राख्ने जुन प्रयास भइरहेको छ, त्यसले चाहिँ कांग्रेसको राम्रो नतिजा आउँदैन । किनभने तराईका जनताले पनि कांग्रेस भनेर त्यही धारलाई मानेको हो । बीपी र गिरिजाबाबुको जुन विचार छ, तराईमा पनि त्यो विचारलाई बेवास्ता गरेर जाँदा समस्या आउँछ । यो विचारलाई मान्ने गु्रप नै त्यहाँ बलियो छ । त्यसैले उनीहरुलाई समेटेर लिएर नगए पार्टीलाई क्षति पु¥याउँछ, एकदम स्पष्ट छ ।
० केही समय अगाडि तपाईं, महामन्त्री शशांक कोइराला, शेखर कोइराला जस्ता कोइराला विरासतसँग गासिनुभएका नेताहरु बैठक बस्नुभयो नि, त्यसले के म्यासेज बाहिर ल्याउन खोज्नुभएको हो ?
हैन, हामीहरु कहिल्यै पनि नमिलेको हैन । तर हामी मिल्दा पार्टी बलियो हुन्छ । कांग्रेसको यो एउटा धार बलियो हुन्छ भनेर त्यसलाई फुटाउने टुटाउने धेरै प्रयास भएको छ । हामी एक हुँदा त्यसलाई टुटाउने फुटाउने जसले प्रयास गरेको छ, उनीहरुलाई पनि यो फुटाएर त फाइदा छैन । जब उनीहरुलाई सजिलो हुन्छ टुटाउने फुटाउने गर्छन्, जब उनीहरुलाई फाइदा हुँदैन तब मिलाउने कोसिस गर्छन् । त्यसैले हामी कसैको लागि मिल्ने होइन । कुनै पनि शक्तिको लागि हामी तीनजना मिल्ने होइन । जनता र देशको लागि मिल्ने हो ।
० बीपी र गिरिजाबाबुले अगाडि सार्नुभएका विचारमाथि अहिले चुनौती खडा भएको महसुस गर्नुभएको हो र ?
हेर्नुस्, बीपीको विचारलाई सिध्याउने ठूलो प्रयास भएको छ । म त्यो विचारका पक्षमा उभिएकाले मलाई धेरै ठूलो चुनौती छ । बीपीको विचार हो । गिरिजाबाबुले त्यसलाई अगाडि बढाएको हो । गिरिजाबाबु हुनुहुन्न तर, अहिले आएर गिरिजाबाबुलाई नै सिध्याउने एउटा ठूलो प्रयास छ । त्यो प्रयास पार्टी भित्रैबाट छ । त्यसको मतियार मलाई पनि बनाउन खोजिएको छ । आज ममाथि ठूलो अट्याक भएको छ, सबैलाई थाहै छ । त्यो मैले भन्नै पर्दैन । यो सबै पचहत्तरै जिल्लाले बुझेको छ । कांग्रेसमा बीपीको विचार र गिरिजाबाबुले अघि सारेको मान्यतालाई कमजोर पार्न म माथि प्रहार भइरहेको छ । त्यस्तै गर्दै जाने हो भने पार्टी पनि कमजोर हुन्छ, देश पनि कमजोर हुन्छ र प्रजातन्त्र पनि कमजोर हुन्छ । अहिले नेपाली कांग्रेसमा प्रजातन्त्र बलियो बनाउनु पर्ने आवश्यकता छ । पार्टी बलियो बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ ।
नेपाली कांग्रेस पार्टीले प्रजातन्त्रमा विश्वास गर्छ भनेर मात्र हिंड्ने र बीपीका विचारहरुलाई त्याग्दै जाने हो भने नेपाली कांग्रेसलाई जनताले साथ दिंदैनन् । नेपाली कांग्रेसले प्रजातन्त्रलाई आघात गर्ने निर्णयहरु लिने, नेपाली कांग्रेसले बीपीको नाम मात्र लिने विचारलाई त्याग्ने, कांग्रेसको, प्रजातन्त्रको लोगोको हिसाबले मात्रै लोगो देखाएर हिंड्ने गरेर हुन्छ ? यसरी कांग्रेस टिक्छ ? कांग्रेसले यस्तै गरिरह्यो भनेदेखिन् यो चाहिँ नसोच्नु कि हामी नेपाली कांग्रेसलाई साथ दिइराख्छौं । कांग्रेसले अर्कैको विचार बोकेर हिंडेपछि हामी साथ दिन्छौं ? दिदैनौ । त्यसैले नेपाली कांग्रेसलाई बचाउने हामी प्रयास गरिरहेका छांै । कांग्रेसको विचारलाई छोड्ने र नेतृत्वमा बस्नेले यो नसोच्नु कि जसले यो गरिरहेको छ तिनीहरुले जे गरे पनि कांग्रेसलाई जनताले भोट हालिराख्छ । त्यो चाहिँ नसोचे हुन्छ, कल्पना पनि नगरे हुन्छ ।
० तपाईंले माओवादीसँग पार्टीको हिमचिम र तालमेललाई संकेत गर्न खोज्नु भएको हो ?
हो, कांग्रेसले त्यो बिलकुलै गलत कुरा गरेको छ । नेपाली कांग्रेस आफैंले जित्नसक्ने पार्टी हो, आफ्नै बलबुताले बनेको पार्टी हो, यसको नीति छ, आफनै क्यापासिटी छ । कांग्रेसलाई किन माओवादी चाहियो ? के कारण हो ? यो एकदम शंकाजनक छ । आफ्नो विचार छोडेर माओवादीसँग के हो यो ? माओवादीलाई किन तराईमा नेपाली कांग्रेसले यत्रो मरिमेटी गरिकन स्ट्याबलिष्ट गर्न खोजेको ? के कारण कांग्रेसले आफ्नो बाटो छोडेर हिंड्यो ? म अहिले चुनावको बेला केही पनि बोल्दिनँ । यो चुनाव सकियोस्, मेरो आफनै धारणा छ त्यसपछि बोलौंला । म आफूमाथि आक्रमण हुँदा पनि खपेर कांग्रेसले लिएको गलत बाटोका बारेमा केही नबोली बसेको छु ।
० तपाईंमाथि आक्रमण भयो भन्नुभयो, कस्तो आक्रमण भयो तपाईंमाथि ?
ममाथि जहिल्यै आक्रमण भइरहेको छ । गिरिजाबाबुको छोरी भएर ममाथि आक्रमण भइरहेको छ । जिल्ला जिल्लामा उहाँको संगठन बलियो छ । कांग्रेसको संगठन छ भने उहाँले बनाएको संगठन मात्रै छ । म जिल्ला जिल्ला गएर हेर्छु गिरिजाबाबु मरेर पनि बाँचिरहनु भएको रहेछ । पार्टीभित्रैबाट प्रहार भैरहेको छ, बाहिरको त छोडिदिनुस् । पार्टीले आक्रमण गरिरहेको छ त्यसको भोगी म पनि भइरहेको छु । यो चुनाव सकियोस् अनि म बोल्छु । अब मलाई कसैसँग डर पनि छैन । न कसैसँग लेना छ, न देना छ । त्यसैले मलाई कुनै डर छैन । फरबार्ड बोलेको छु, म कुनै झुट बोल्दिनँ ।
० तपाईले पार्टीको लाइन भन्दा विपरित बोलेर पो आक्रमण भएको हो कि ? तपाईले केपी ओलीको सरकार ढाल्नु गल्ती हो भनेर एकपटक भन्नुभएको थियो । पार्टीले नयाँ गठबन्धन बनाइराखेको समयमा यस्तो बोल्नु हुँदैन भनेको हो कि पार्टीले ?
मैले कसरी त्यो कुरा गलत बोलेँ ? केपी ओलीको सरकार ढाल्यो भनेदेखिन् देशमा अस्थिरता आउँछ विदेशीले खेल्छन् भनेको हो । ओलीको सरकार ढाल्नु हुँदैन, अहिले मिलेर जानुपर्दछ, राष्ट्रिय एकता सहमति मेलमिलाप गर्नु पर्दछ भनेको हो । त्यो कुरा कसरी गल्ती भयो ? त्यो कुरा अहिले प्रमाणित भएन र ? राजाले गलामा फाँसीको फन्दा हाल्दा त बीपीले राष्ट्रिय मेलमिलाप भन्नुभयो । ट्याक्टफुल हुनुप¥यो नि पार्टी । देश बचाउनका लागि, आफनो पार्टी बचाउनको लागि, आफ्नो सिद्धान्त बचाउनको लागि अलि क्लेभर र स्याक्रिफाइस पनि गर्न सक्नु प¥यो । त्यसमा के मैले के गल्ती बोलेँ ? ठीक बोलेको छु । अहिले पनि त्यही भन्छु म । केपी ओलीको सरकार ढाल्दा त्यसबेला त्यो गल्ती भएकै छ । त्यसपछि अस्तिरथा आयो । त्यो सरकार ढाल्ने बितिक्कै अस्थिरता आयो । कहिलेकाहिँ दुई स्टेप पछि हट्दा तपाईंलाई बढी फाइदा हुनसक्छ । जहिल्यै पनि अगाडि जान्छु भन्दा फेरि तपाईं तल झर्न सक्नुहुन्छ । यस्तो बोल्दा मैले के गल्ती गरेँ ? मैले एकदम ठीक बोलेको छु । राइट टाईमामा राइट बोलेको छु । धेरैले मलाई भनिरहेका छन्– तपाईंले ठीक भन्नुभयो । ल हेर्नुस् ओलीको सरकार ढालेपछि कति अस्थिरता आयो ? त्यसपछि के के भएन ? कसको लागि सरकार ढालेको ? नेपाली जनताको लागि ढालेको हो भने त औचित्य पुष्टि हुनु परेन ?
० केपी ओलीको सरकारलाई चाहिँ तपाईंले किन यति धेरै प्रसंशा गनुभएको ?
मैले प्रशंसा ग¥या होइन । केपी ओलीले मात्रै काम गर्न सक्छन्, हामीले गर्न सक्दैनौं भन्या होइन । काम त गर्नुप¥यो नि । कांग्रेसले पनि काम ग¥या थियो । मान्छे सही ठाउँमा आयो भने काम त गर्दाे रहेछ नि । कांग्रेसले पनि काम गरेर देखाउनुपर्छ यतिकै बीपी भनेर त हुँदैन नि । खाली बीपीको जन्मदिन मनाएर त मान्छे प्रभावित हुँदैनन् । बीपीलाई भजाएर, भजन गाएर पार्टी अगाडि बढ्दैन नि । विकास हुनु प¥यो । विकास गर्ने के छ त भिजनहरु त्यो दिनु प¥यो । हामीले अब विकासको कुरा गर्ने हो । अब विकासलाई लिएर अगाडि बढ्ने हो । काम नपाएको जस्तो गर्ने होइन । अलिकता त हुनु प¥यो नि बौद्धिकता पार्टीमा पनि ।
० प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भारत भ्रमणका क्रममा बोलेका कुरालाई कसरी लिनुभएको छ ?
हैन, अहिले म धेरै बोल्दिन । चुनाव छ, धेरै बोल्दा पार्टीलाई यस्तो ग¥यो उस्तो ग¥यो भन्ने आरोप लगाउँछन् । चुनावपछि धेरै बोलौंला । चुनावको रिजल्ट हेर्नुस् कस्तो आउँछ त्यसपछि बोलैला ।
० काँग्रेसलाई बचाउन चाहिँ के गर्नुपर्छ तपाईको विचारमा ?
जसरी गिरिजाबाबुले पहिला पहिला पूरा मुलुकलाई लिड गर्नुहुन्थ्यो । त्यसरी लिडगर्ने नेतृत्व चाहियो सबैभन्दा पहिला त कांग्रेसलाई बचाउने हो भने । भिजनरी नेता चाहियो जसले फस्ट प्रायोरिटी यो देश अनि जनतालाई दिनु प¥यो । अनि मात्र अरु कुरा गर्ने हो । नेपाली कांग्रेसभित्र त्यो नहुञ्जेलसम्म यो पार्टीले धेरै ठूलो क्षति हुनसक्छ । जनताले नबुझेको त छैन यो कुरा । यो सबैले बुझेको छ, मान्छेले नभनेको मात्रै हो, कोही नबोलेको मात्रै हो । मैले आज भनेँ, किन भनेको हुँ भने मलाई धेरै पीडा भयो । एकदम बोल्न नपाएर मनमा गुम्सेको कुरा कहिलेकाहिँ आउँछ नि । मलाई पनि त्यही भएको छ । जे गर्ने हो देशका लागि गर्ने हो, जनताको लागि गर्ने हो । अब मलाई अरु केहीसित मतलब भएन ।
० जुन ढंगले पार्टी चलिरहेको छ तपाईलाई चित्त बुझेको छैन ?
मलाई चित्त बुझेको छैन । तर, अब अहिले कुरा नगरौं जति पीडा छ, छ । फेरि चुनावको मुखमा भएर बोल्दिनँ भनेको ।
० तपाईंले भनेजस्तो राष्ट्रिय एकतालाई मजबुत बनाउनका लागि चाहिँ के गर्नुपर्ला ?
राष्ट्रिय एकता मेलमिलाप किन भनेको गिरिजाबाबुले ? राष्ट्रिय एकता भयो भने विदेशी शक्ति कोहीले इन्टरफेयर गर्न सक्दैनन् । आफ्नै खुट्टामा उभिन्छ देश । हामी सक्छौं नि, हामी सक्षम छैनौं ? नेपालीहरु सक्षम छैन ? यहाँ सक्षम ब्यक्ति पनि छन् तर, अगाडि आउनै दिंदैनन्, सक्षम व्यक्तिलाई पछि पारिएको छ, सिध्याउने प्रयास गरिएको छ । यसप्रति कोही बोल्दैनन्, यो डरलाग्दो कुरा हो ।
० पछिल्लो समय माओवादीसँग तालमेल गरेकोप्रति सकारात्मक सन्देश गएको छैन नि, होइन ?
यो एकदम नराम्रो, यसरी माओवादीसँग मिलेर हिंड्नुपर्ने कति कमजोर भएछौं त हामी ? एमालेलाई एक्ल्याउने, एमालेलाई सिध्याउने भन्या छ । एमालेलाई सिध्याउने कि आफू सिद्धिने हो यो रणनीति ? यसले त एमाले बलियो हुन्छ । यसले नेपाली कांग्रेस सकिन्छ । नेपाली कांग्रेसले यति पनि बुझेको छैन ? यति त बुझ्नु पर्यो नि नेपाली कांग्रेसको नेताहरुले । यसरी कसलाई फाइदा भइरहेको छ भन्ने बुझ्नु परेन ? माओवादीसँगको एकताले हामीलाई फाइदा हँुदैन । जसलाई सिध्याउन भनेर यो गरेको हो उसैलाई फाइदा भइरहेको छ । त्यति पनि नबुझ्नेले किन राजनीति गर्ने ? यति पनि सेन्स भएन भने, विवेक भएन भने किन यो राजनीति गर्ने ?
० माओवादी र अरु पार्टीसँग तालमेल गर्दा पनि किन कांग्रेसले स्थानीय चुनावमा दोस्रो बन्नु प¥यो ?
यसमा त हाम्रो धेरै कमजोरी छ । अब त्यसलाई सुधारेर जानुपर्छ भनेको अब फेरि अर्को मिस्टेक गर्दैछौं । चुनावको मुखमै जहिल्यै यस्तो हुन्छ ।
० एमाले नसिध्याउञ्जेल कांग्रेससँग दीर्घकालीन तालमेल हुँदैछ भनेर अस्ती प्रचण्डले पनि भन्नुभयो, त्यस्तो होला र ?
प्रचण्डजीलाई म अन्डरस्ट्याण्ड गर्छु । उहाँलाई त फाईदा भैरहेको छ । उहाँलाई लागिरहेको छ कि उहाँले यसैगरी औंलामा नचाइरहनुभएको छ नेपाली कांग्रेसलाई । त्यो औंलामा घुम्ने चक्र हुन्छ नि, कांग्रेसको नेतृत्वलाई प्रचण्डजीले औंलामा नचाइरहनु भएको छ । हाम्रो नेतृत्व प्रचण्डको तालमा नाचिरहने काम भएको छ । प्रचण्डजीलाई त फाइदा छ, उहाँको धर्म नै हो, तर नेपाली कांग्रेसले के गरेको ? नेपाली कांग्रेसले बुझनुपथ्र्याे नि ।
० भारतीय थिंकट्यांकीहरुले नेपालमा एमाले सिध्याउन काँग्रेस, माओवादी राजपाको गठबन्धन बलियो बनाइदिने कुरा आएको थियो । के राजनीति त्यहि दिशामा जान लागेको हो ?
मैले पनि त्यस्तो आएको छ भन्ने सुनेको छु । यस्तो ब्लण्डर आइरहेको छ । तर, यसबारे अहिले म बोल्दिनँ । मलाई चुनावसम्म पर्खनुस् । चुनाब सकियोस अनि सुझाब दिउँला । माओवादीसँग मिल्नै हुँदैन, नेपाली कांग्रेस डिमोरलाइज्ड हुन्छ । यसै कारण नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्तामा निराशा छ । पार्टीको सिद्धान्त नै त्यागेपछि भन्ने कुरा केही पनि हुँदैन नि । हामीलाई अब यस्तो नेतृत्व चाहियो कि जसले गिरिजाबाबुले जस्तो संगठन बनाउन सकोस् । उहाँले कहिल्यै पनि कार्यकर्तामा निराशा आउन दिनु भएन । पार्टीका साथीहरुलाई जहिल्यै पनि हौसला दिइराख्नु भयो । त्यस्तो नेता चाहिएको छ ।